Mpamatsy sy mpanamboatra rafitra mpitari-dalana - Mpanamboatra System Guide China
Ny rafitry ny lalamby fitarihana alàlan'ny ascenseur dia ampiasaina ho fanohanana amin'ny fanohanana sy fanamboarana ny lalamby mpitari-dalana, ary apetraka amin'ny rindrina na andry hoistway. Izy io dia manamboatra ny toerana misy ny lalamby mpitari-dalana ary mihetsika isan-karazany avy amin'ilay lalamby mpitari-dalana. Takiana fa ny lalamby mpitari-dalana tsirairay dia tokony hotohanan'ny rojo vy mpitari-dalana roa farafaharatsiny. Satria ny fetra sasany dia voafetran'ny hahavon'ny rihana ambony, iray ihany ny bracket mpitari-dalana iray raha tsy latsaky ny 800mm ny halavan'ny lalamby fitarihana.
Lifting Guide Rail Ho an'ny Elevator
Ny lalamby fitarihana ny ascenseur dia làlana azo antoka handehanan'ny ascenseur miakatra sy midina amin'ny hoistway, hiantohana ny fiara sy ny mpanohitra miakatra sy midina manaraka azy.
Vatofantsika vatofantsika ho an'ny fametahana bracket
Ny valizy fanitarana ny ascenseur dia mizara ho bolts fanitarana casing sy ny bolt fanitarana fanamboarana fiara, izay mazàna dia misy visy, fantsona fanitarana, mpanasa lamba fisaka, mpanasa lohataona ary voanjo hexagonaly. Ny fitsipika fanitsiana ny visy fanitarana: ampiasao ny hantsana miendrika wedge mba hampiroboroboana ny fanitarana mba hiteraka hery mifamatotra frictional mba hahatratrarana ny vokatra raikitra. Amin'ny ankapobeny, aorian'ny fampidirana ny bolt fanitarana ao anaty lavaka amin'ny tany na amin'ny rindrina, dia ampiasao fitaovana enti-miasa mba hanamafisana ny voanjo amin'ny fiparitahan'ny bolt amin'ny famantaranandro.